Pre Insulated Duct CNC ဖြတ်တောက်စက်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူ။
Pre- insulated ပြွန်ဖြတ်စက်
HVAC insulator ကို cuttion စက်
Yingde VerbEch Intelligen အသုံးအဆောင်များ CO ။ LTD ။ CNC ပြွန်နှင့် HVAC GROLLE ထုတ်လုပ်မှုစက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်ခြင်း, ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းများတွင်အဓိကအားဖြင့်ပါဝင်ခဲ့သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တိကျခိုင်မာသည့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံ, ခိုင်မာသောနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စည်းကိရိယာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနနှင့်အရည်အသွေးမြင့်0န်ဆောင်မှုပေးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းဌာနတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုစီတွင်ရင့်ကျက်ပြီးအပြည့်အဝကော်မရှင်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်နှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိပြီးပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းမပြုမီပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသေချာစေရန်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောကော်မရှင်များပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ r တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး&D TEA သည်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် 15 နှစ်တာကာလအတွေ့အကြုံရှိသည်။ သူသည်မူလစက်မော်ဒယ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နိုင်ရုံသာမကစျေးကွက်လိုအပ်ချက်များအတွက်သင့်တော်သောထုတ်ကုန်အသစ်များကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ အလိုအလျောက်ဆော့ဗ်ဝဲ၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အားစိုက်ထုတ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ကိရိယာတစ်ခုစီတွင်ချောမွေ့ပြီးလက်တွေ့ကျကျလုပ်ဆောင်ချက်ဆော့ဖ်ဝဲရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများရှားပါးမှု၏ပြ problems နာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သဖြင့်သာမန်လုပ်သားများသည်ရှုပ်ထွေးသောထုတ်ကုန်များပြုလုပ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖောက်သည်တိုင်းအတွက်စိတ်ရင်းမှန်တဲ့နှလုံးရှိတယ်။ စက်ကိုရောင်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းအပြီးတွင်အဖြေပေးသည့်0န်ဆောင်မှုများကိုအမြဲတမ်းပေးလိမ့်မည်။
အားကြီးသောကုန်ထုတ်စွမ်းအား ပြုပြင်ခြင်းနှင့် debugging အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းစင်တာ
အကြီးတန်းဒီဇိုင်း & ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အကြီးတန်းဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ 20 ကျော်နှင့်စီးပွားရေးဌာနခွဲ4ခုကျော်
နောက်ကွယ်မှအင်ဂျင်နီယာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံ အရည်အသွေးကို ISOO9001 အရည်အသွေးအရည်အသွေးစနစ်ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုသည်
အရည်အသွေးမြင့် Pre-Sales ဝန်ဆောင်မှု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများကိုတင်းကြပ်စွာအကောင်အထည်ဖော်
Vitech သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးသုံးစွဲသောပြွန်ဖြစ်သော Ductwork, Insulator Cutting စက်ထုတ်လုပ်သူ, ကျွန်ုပ်တို့သည် R ကိုအထူးပြု&d and duct ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် HVAC GRILLE ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောပြွန်ဘုတ်အဖွဲ့ဖြတ်စက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပြည့်စုံစာကြည့်တိုက်တွင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။ အဆိုပါ insulator cutting စက်သည် Paser Clos 6, နံရံကပ်စက်များအပါအ0င် HVAC အပူပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ကင်မရာများနှင့်ပျံ့နှံ့ခြင်းစက်သည်အလုပ်သမားရှားပါးမှုပြ problem နာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီးထုတ်လုပ်သူအများစုအတွက်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်မလုံလောက်ပါ။
2006 ခုနှစ်မှစတင်ခြင်း 2006 ခုနှစ်တွင် Ventech သည်အထူးသဖြင့် HVAC System Ducruct နှင့် soft tablication တွင်အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြေရှင်းနည်းများကိုအာရုံစိုက်သည်။
Field Installation နှင့်နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေး
သင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်0န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများရှိပါက,
Vitech အမည်မှာ Verech သည်အလိုအလျောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောပြွန်စက်ကိရိယာများတွင်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဆင်တူသည်။
2006 ခုနှစ်မှစတင်ခြင်းသည် CNC HVAC GRINCORESS နှင့် duct production solution တို့ကိုအထူးသဖြင့် Pre Insulated duct နှင့် insulator ဆိုင်ရာဖြတ်တောက်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်အာရုံစိုက်သည်။
Verbech Research and Development နှင့် Developments သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှု, အောင်မြင်မှုနှင့်ဂုဏ်သတင်းအတွက်အခြေခံကျသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်သည်အခြေခံကျသည်။ International Bands အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Ventech ထုတ်ကုန်များကိုတင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစံနှုန်းများနှင့်အညီထုတ်လုပ်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအတွက်တီထွင်ထုတ်လုပ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံဂွမ်ထင်တွင်တည်ရှိသော Verbech သည် 40000M2 ထုတ်လုပ်မှုနယ်မြေကိုရရှိခဲ့ပြီး, Ventech သည်ထုတ်ကုန်သုံးခုရှိသည်။ Phenolic panel ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည်ပြွန်ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်တွင်ဂုဏ်သတင်းမြင့်မားသော Reputation Reputing ရှိ Pre-insulated duct panel ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်နှင့် insulation cutter စက်။
Verbech Research and Development နှင့် Developments သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှု, အောင်မြင်မှုနှင့်ဂုဏ်သတင်းအတွက်အခြေခံကျသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်သည်အခြေခံကျသည်။
Ventech သည်အထူးပြုအင်ဂျင်နီယာနှင့်အရောင်းအထောက်အကူပြု0န်ထမ်းများကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးသင့်အားနည်းပညာနှင့်ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်များကိုကူညီရန်စောင့်ဆိုင်းနေပြီးသင့်အားကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိသောဖြေရှင်းနည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
လိပ်စာ: နံပါတ် 3, Hongcha လမ်း, Yinghong
စက်မှုဇုန်, Yingde, 513042, Qingyuan, Guangdong, ChinaYPE 2019
ဆက်သွယ်ရန်ဆက်သွယ်ရန် verbech ။
phenolic insulator ကို board
မူပိုင်ခွင့်© 2019 Yingde VerbEch IntellenGe Equipment Go. , Ltd. | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး